We Fight We Win. -- " More than Media ": မိထ္ထီလာ သတင်း - Crimes Against Humanity
မိထ္ထီလာ သတင်း - Crimes Against Humanity
တာဝန်ယူသည့် အစိုးရ တရပ် ဖြစ်လိုလျှင် မိထ္ထီလာ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော Crimes Against Humanity လူသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဤရာဇ၀တ်မှု ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တာဝန်ခံ ပြီး အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးအရေး ယူမှု ပြုရမည်။
The individuals who committed the such crimes must be held accountable for the most serious atrocities against human dignity. President Thein Sein must bring those perpetrators to justice.
မိတ္ထီလာ မျက်မြင်သက်သေ လူထုတွေ ပြောဆိုတာ က အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်သမား အုပ်စု ဟာ ပြဿနာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရက်ကွက် က လူထု မဟုတ်ကြဘူး။ အခြားဒေသ တွေ က ဖြစ်ကြတယ်လို့ အတည်ပြုပြောဆိုနေကြတယ်။ (မျက်မြင်သက်သေများ၊ ဓာတ်ပုံအထောက်အထားများရှိပြီးဖြစ်သည်။)
အကြမ်းဖက် သမားတွေ ဟာ စနစ်တကျ၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နောက်ကွယ်ကနေ သွေးထိုး လှုံ့ဆော် အမိန့်ပေး စေခိုင်းထားတဲ့ ပုံစံ နဲ့ အုပ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်၊ သတ်ဖြတ် အကြမ်းဖက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။
ဒီ အကြမ်းဖက် သမားတွေ ဟာ အုပ်စုလိုက် အခြားမြို့တွေ ကို လည်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။
ဒီ ရက်စက်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဟာ Crimes Against Humanity ပုံစံ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ က ပြောဆိုနေကြတယ်။
ဒီ အကြမ်ဖက်သမားတွေ နှင့် နောက် ကွယ် က ကြိုးကိုင်နေသူတွေ ကို တရားဥပဒေ အရ ဖော်ထုတ် အရေးယူခြင်းမရှိသ၍၊ နေရာ အနှံ့မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေ ဆက်လက်ရှိနေမယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စလှယ် မစ္စတာ နမ်းဘီးယား က ယင်း အကြမ်းဖက် သမားတွေ ကို အမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
-ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဟာ အကြမ်းဖက် သမားတွေ ကို အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ် ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဟာ Crimes Against Humanity လူသားချင်း အပေါ် ရာဇာဝတ်မှု ကျူးလွန်းသည့် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်တာ ကြောင့် အကြမ်းဖက်သမားတွေ နှင့် နောက် ကွယ် က သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးနေသူတွေ ကို အမြန်ဆုံးဖမ်းဆီး အရေးယူဖို့ တာဝန် အရှိဆုံးသူဖြစ်သည်။
ထောက်ခံတယ် အထက်က comment ကို။
အဓိက က မြန်မာတွေရဲ့ ရတနာ ၃ ပါးထဲက သံဃာ ကိုသတ်လိုက်လို့ဖြစ်တာ။
မြန်မာတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ကို စော်ကားနေသေးသမျှ ပြသနာတွေဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။
ဘုန်းကြီးကိုသတ်တဲ့ကောင်ဟာ ဒီပြသနာကြီးရဲ့ မူရင်းကောင်ပဲ။